Home The News राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कहाँ पठाउने भन्नेमै विवाद : नेम्वाङ
राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कहाँ पठाउने भन्नेमै विवाद : नेम्वाङ	administrator	काठमाडौं, माघ २० (नागरिक)- संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राज्य पुर्नसंरचना सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन संविधान सभामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको बताएका छन्। समसामयिक अध्ययन केन्द्र नेपालद्धारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वौल्दै नेम्वाङले प्रतिवेदन संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा पठाउने कि राज्यपुर्नसंरचना समितिमा भन्ने विषयमा विवाद रहेको बताएका हुन्। 'आयोगको प्रतिवेदन कता पठाउने भन्नेमा विवाद भइरहेको छ। राज्यपुर्नसंरचना समितिमा कि संवैधानिक समितिमा?', नेम्वाङले भने।
संविधान सभा नियमावलीमा आयोगको प्रतिवेदन राज्य पुर्नसंरचना समितिमा पठाउने ब्यवस्था छ। तर, आयोग गठन हुन ढिलाई भएपछि पुर्नसंरचना समितिले यो विषयमा छलफल गरी यसअघि नै आफनो प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइसकेको छ। समितिले आफनै प्रतिवेदन समेत संवैधानिक समितिमा पठाएका कारण यो अडचन फुकाउन नियवमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। नियमावली संशोधनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन भएपनि समितिमा सहमति जुटन सकेको छैन। समितिमा रहेका माओवादी सदस्यले पुर्नसंरचना समितिमा पठाउनुपर्ने र काग्रेस, एमालेलगायतका अन्य दलका सदस्यले संविधानसभा हुँदै संवैधानिक समितिमा लैजानुपर्ने जिकीर गरेका छन्। नेम्वाङले आफुले नियमावली संशोधनका लागि वारम्वार ताकेता दिएको जानकारी दिए। आइतवारसम्म यसको टुंगो लगाउन आग्रह गरेको बताउदै उनले भने, 'सायद त्यस दिन नियमावली संशोधनको विषय टुंगो लाग्छ होला। अनि त्यसैअनुसार राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि संविधानसभाभित्रको छलफलमा प्रवेश गर्छ।' सभामुख नेम्वाङले राज्य पुर्नसंरचना गर्दा तीन तह रहने कुरामा संविधानसभाभित्र कुनै विवाद नरहेको प्रष्टयाए। 'केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन निकाय रहन्छ भन्नेमा संविधानसभाभित्र कुनै विवाद छैन। अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय बनाउनुपर्छ भनेर तीन तह भनिएको हो', उनले भने। प्रतिवेदन बनाउने क्रममा आयोगभित्र भने संघीयताको तहको विषयमा विवाद आएको सुनेपनि त्यसवारे आफुलाई विस्तृत थाहा नभएको नेम्वाङले बताए। उनले संघीयता लगायत संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति खोजेर निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हुने बताए। कार्यक्रममा वोल्दै पुर्व सभामुख दमननाथ ढुङगानाले संविधानसभाको समयअवधि थप गर्न नहुने जिकीर गरे। संविधानसभाको म्याद थप गर्न नहुने भनी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि सभामुखले दिएको निवेदनको प्रसंग उल्लेख गर्दै ढुङगानाले भने, 'सभामुखले दिएको निवेदन उहाँको हो कि सिंगो संसदको? सिंगो संसदको भए त्यो राष्ट्रकै एजेण्डा हुन्छ। यस हिसावले सर्वोच्च पनि 'ट्रायल'मा परिसक्यो।'